Dowladda Federaalka oo 'Digniin' u dirtay Shirkadaha Shidaalka ka baara dalka | Keydmedia
Dowladda Federaalka oo ‘Digniin’ u dirtay Shirkadaha Shidaalka ka baara dalka
Muqdisho (KON) - Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa Maanta oo Sabti ah Digniin u dirtay Shirkadaha Shisheeye ee ku howlan Shidaal-baaris ay ka sameeyaan Gobollo kamid ah dalka.
Sarkaal katirsan Wasaaradda Wasaradda Macdanta iyo Batroolka ee DFS ayaa Maanta ku qabtay Muqdisho Shir Jaraa'id, kaasi oo uu uga hadlay Maamullo si gaar ah Heshiiyo ula gala Shirakado Ajnabi ah si ay Deegaanadooda Shidaal uga baaraan.
"In laga faa'idaysto Kheyraadka dalka, ma ahan mid khaldan balse waxaa denbi ah in Maamul Goboleed Heshiis la galo Shirkado Shisheeye, iyadoo aysan Dowladda Dhexe waxba ka ogeyn, taasina waan ka digeynaa," ayuu yiri Maxamed Cali Nuur Xaaji oo ah sarkaal ka tirsan Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka.
Wuxuuse sheegay in DFS ay hergelisay Shuruucdii iyo Xeerarkia Shidaal-baarista, isagoo qeexay in Dowladda Dhexe iyo Maamuladda Federaalka ah ay wadaagayaan macdanta iyo shidaalka la doonaayo in dalka la soo saaro, balse Heshiiska ay gali karto oo kaliya Xukuumadda Soomaaliya.
Shirkadaha ayaa looga digay inay dalka ka baaraan Shidaal, iyagoo Dowladda Dhexe ka haysan Ruqsad/ Ogolaansho buuxa oo u fasaxaya inay tagaan Gobolada, kadibna baaris ku sameeyaan Goobaha uu ku jiro Shidaalka.
Maamullada ayaa dhankooda loogu baaqay inay u hogaansamaan Shuruucda dalka & Xeerarka u yaalla ee lagu heshiiyay Baarlamaankana uu ansixiyay.